Xog: Khayre oo diiday in la qariyo Fadeexadii ka dhacday Dekadda, iyo Madaxa Canshuuraha oo Maxkamad wajahaya. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 21, 2017
Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somalia, Xasan Cali Khayre ayaa si adag u diiday codsi ugu yimid Xildhibaano doonaya in la qariyo Kiiskii ka dhacay Dekadda ee lagu helayo Musuq Maasuqa Madaxa Canshuuraha Wasaaradda Maaliyadda ee Dekadda, Axmad Samoow.
Khayre oo ay ka go’an tahay la Dagaalanka Musuq Maasuqa ayaa wacad ku maray inuusan marnaba aqbalayn in la qariyo Fadeexadii ka dhacday Dekadda Muqdisho. Wuxuuna u sheegay Xildhibaan u tagay oo doonayay in arrintan si hoose loo xaliyo inuu gacanta ku hayo Boonooyin been abuur ah oo aan ka soo bixin Wasaaradda Maaliyadda, kuwaasoo lagu canshuurayay Badeecadaha ka soo daga Dekadda. isagoo Raiisul Wasaaruhu u sheegay Xildhibaanada u tagay in arrintan uu Guddi u saaray, isla markaana loo gudbinayo Maxkamadda ku shaqadda leh.
tan iyo wixii ka dambeeyay markii loo magacaabay Madaxa Kastamka Canshuuraha Dekadda, Axmad Samoow waxaa isi soo tarayay Musuq Maasuq xooggan oo horeeyay Dekadda, Waxaana Illo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen Hornafrik in Samoow uu soo samaystay Boonooyin been abuur ah oo uu ku canshuuro Badeecadaha, taasoo ka dhigan in Lacagta soo xaroota aysan galin Qasnadda Dawladda ee uu iskiis u qaato.
Samoow waxa uu isagoo aan Bil hayn Xilkan ka iibsaday Guri Wayn Muqdisho, iyadoona uu ku socdo Gaari aan Xabbadu karin oo ay leedahay Wasaaradda Maaliyadda, isagoo sidoo kale soo iibsday Hub farabadan oo uu isku illaaliyo, taasoo ay dad badan is waydiinayaan halka dhaqaalahan ka yimid.
Madaxa Canshuuraha Dekadda Muqdisho.
Ku Simaha Hanti Dhawraha Qaranka oo loo xilsaaray baarista arrintan ayuu Samoow u sheegay inay is afgartaan oo uu u ballanqaaday in Kiiskan la joojiyo, balse uu wali ku dhagan yahay Raiisul Wasaare Khayre oo u muuqda inay ka go’an tahay inuusan aqbalin Musuq Maasuqa heerkan le’eg.
Booliska Illaaladda Canshuuraha, iyo Xafiiska Xeer Illaalinta Qaranka oo arrintan qayb ka ah Baaristeeda waxay ogaadeen in Mudooyinkan ba lagu canshuurayay Badeecadda ka soo degta Dekadda Boonooyin Been Abuur ah oo uu Samoow iskiis uga soo samaystay Madbacad ku taala Muqdisho.
Hornafrik oo dabagal ku samaysay Musuq Maasuqa ka jira Dekadda Muqdisho waxay dhawaan idiin soo bandhigi doontaa Boonooyinka been abuurka ah ee lagu canshuurayay Badeecadda, Madbacaddii soo samaysay, iyo waliba inta lacag ah ee ka soo xarootay Boonooyinkan Been abuurka ah. Waxaan sidoo kale ka fiirsanaynaa inaan soo bandhigno Sawiradda Gaadiidka Qaaliga ah ee uu iibsaday iyo Guri wayn oo uu gatay.
Saldhiga AMISOM ee Jowhar oo Madaafiic lagu weeraray.